Samsung oo ka bilaabaysa iibinta qalabka dib u habeynta Maraykanka | Wararka IPhone
Samsung waxay bilaabaysaa inay ku iibiso qalab casriyeysan dalka Mareykanka
Mar kasta oo qalab soo food saaro nooc dhibaato ah, gaar ahaan 15-ka maalmood ee ugu horreeya ka dib iibsiga, soo saaraha sida caadiga ah aaladda ayuu ku badalayaa mid cusub. Qalabkii hore, oo kuxiran nooca dhibaatada ay soo bandhigto, badanaa waa la hagaajiyaa oo mar labaad baa la iibiyaa ama waxaa loo isticmaalaa inay dib ugu laabtaan suuqa iyagoo badalaya aalado aan la dayactiri karin inta lagu jiro mudadooda dammaanad qaadka ama qiimaha uu ku kacayo shaqada iyo qaybaha keen qalab cusub. Shirkadda reer Kuuriya ee Samsung ayaa qorshaynaysa inay aaladda noocan oo kale ah suuqa ku soo bandhigto sannadka dambe dalka Maraykanka, sida laga soo xigtay ilo kala duwan oo ay soo xigatay Reuters.
Shirkadda Kuuriya waxay dooneysaa inay sii wado kordhinta faa iidadeeda kadib natiijooyinkii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee shirkadu ku laabatay wadadii faa'iidada laba sano kadib iyo kadib dib u habeynta qeybteeda mobilada. Samsung waxay rajeyneysaa in gelinta qalabka dib loo hagaajiyay iibinta qeyb ka mid ah qorshaheeda cusbooneysiinta qalabkeeda ay gacan ka geysan karto sare u qaadista qiimaha terminal-ka isla markaana ay ku sii socoto xaddiga hawlgalka ee 10%.
Boosteejooyinka gaari doona suuqa wuxuu ka imaan doonaa barnaamijka cusbooneysiinta aaladda hadda laga helo Mareykanka iyo Kuuriyada KoonfureedSi kastaba ha noqotee, Reuters ma aysan awoodin inay ogaato waxa sicir-dhimista loogu sameyn doono boosteejooyinkan ama dalalka barnaamijkan laga heli doono marka laga reebo Mareykanka.
Dhawaan Apple waxay aragtay sida Hindiya u horjoogsatay ujeedka shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino taas gasho qalabka dib loo habeeyay suuqa ka imanaya dalal kale, aaladaha qaarkood ee geli lahaa inay si toos ah ula tartamaan boosteejooyinka ugu wakiillada badan ee suuqa maxalliga ah, taas oo waxyeello u geysanaysa soo saarayaasha dalka si isku mid ah.
Sida laga soo xigtay BNP Paribas, Qiimaha iPhone-ka gacanta labaad ku jira waa 69% qiimaha iibka, halka boosteejooyinka shirkadda Kuuriya ay gaarayaan oo keliya 51% qiimaha asalka ah sanad kadib suuqa. Tirooyinkan waxay kaliya tixraacayaan suuqa Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung waxay bilaabaysaa inay ku iibiso qalab casriyeysan dalka Mareykanka
Hadda ma shaqeeyo ipad. Url wuxuu ku geynayaa iphone-ka hadda jira.
15-ka Ciyaar ee ugufiican Apple TV 4, 9 Bilood Kadib Bilowga